Matipi ekutora ikati yarasika | Noti Katsi
Dzimwe nguva unosangana nekatsi iyo, kunyangwe ichigara mumugwagwa, ine hunhu hunofambidzana nevanhu, hwakadzikama uye hune rudo. Uyu murume ane furry angangodaro akasiiwa nemhuri yake yevanhu, uye ari kutarisira kuve chikamu chemumwe zvakare.
Kana isu tasarudza kuzvigamuchira, isu tinofanirwa kufunga zvakateedzana zvezvinhu zvisati zvaitika kuitira kuti pasave neshamisiko gare gare. Nenzira iyi, isu tinotanga hukama huchave hwakanaka kwazvo kubva pakutanga. Sei? Iine iyo matipi ekutora katsi yakarasika Ndiri kukupa te.
1 Dzidza kusiyanisa kati fati kubva kune akasiiwa
2 Iva nemoyo murefu nekatsi yakarasika
Dzidza kusiyanisa kati fati kubva kune akasiiwa
Kunyangwe paine katsi dzakawanda mumugwagwa, isu tinofanirwa kusiyanisa iyo feral yevaya vakasiyiwa. Ivo vekare havana kumbobvira vaonana nevanhu (kunze kwekunge, pamwe nemuzvipiri anomutora kuti anodya) uye, nekudaro, anonyumwira nguva dzese dzatinoda kusvika padhuze nepfungwa yekuti angangotiza.
Asi kati yakasiiwa yakasiyana. Anogona kutya vanhu, asi hazvizomutorera zvakawanda kuti aswedere padhuze kana tikasimbirira zvishoma nezvishoma uye kana tikamuratidza chikafu. Zvakare, zviri nyore kuwana iyo inosvika kwauri uchitsvaga, kwete chekudya, asi chengwariro shoma uye chidakadaka.
Iva nemoyo murefu nekatsi yakarasika
Kana tikazopedzisira tafunga kutora katsi yakarasika, isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu uye titange hukama hwehukama kubva munzira imwechete. Kwemazuva mashoma isu tinofanirwa kuswedera padyo naye, tichimuunzira chikafu chakanyorova, uye tinogona kunyange kupedza nguva tichitamba naye. Nei uchizviita nenzira iyi? Nekuti nenzira iyi zvichave nyore kwazvo kuti timuendesere kumba gare gare, nekuti panguva iyoyo anenge ave nekuvimba matiri. Kana iwe uri munzvimbo ine njodzi, isu tinobva takuendesa kumba kwako kutsva.
Kamwe paanosvika kwatiri achikumbira kutapirirwa, ichave nguva yekumutora kuenda nesu. Imba mairi tichafanirwa kunge takatenga mubhedha wake, marara bhokisi, chikafu nemvura saka unogona kuwana zvaunoda zvasangana. Zvekuti zvirege kunyanya kukumanikidza, zvirinani tizvichengete mumba kwemazuva mashoma, uyezve vhura musuwo kuti aongorore.
Kana isu tichida kuona kuti zvinhu zvese zvichafamba mushe, kana zvimwe kana zvishoma zvakanaka, zvinokurudzirwa kwazvo kubaya mumatanho akati wandei feliway neImba. Nenzira iyoyo hauzonzwa kushamisika.
Katsi yakasiiwa inogona kudzokera kunogara nevanhu, chero bedzi ichishivirira uye ichengetwa zvine ruremekedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Matipi ekutora katsi yakarasika